Ego ole ka igwe kwụ otu ebe na-eri? - Bgba Ígwè
Isi > Bgba Ígwè > Ndozi igwe eji eji igwe eme ihe - azịza ya
Ego ole ka igwe kwụ otu ebe na-eri?
Dabere na mpaghara gị, ndịụda igwe kwụ otu ebe-ụgwọ akwụ ụgwọebe ọ bụla n'etiti $ 60 na $ 100. Ọtụtụ ụlọ ahịa na-enye nhọrọ abụọ - Obere / BasicTune-elunaụgwọ$ 55 ka $ 89 na Onye isiTune-elunke ahụụgwọn’agbata $ 119 na $ 150.Na-efu mgbe ụfọdụdabere na ọrụ ndị dị natune-elu.
Gbaa ịnyịnya ígwè zuru ezu ma n'oge na-adịghị anya ọ ga-ada mbà, ọ na-esiri ike itinye okwu ọ na-adị ma ọ bụ na ọ gaghị eche na mbanye ahụ anaghị enwe ịnyịnya ibu, ọ na-enwe ike ọgwụgwụ, mana ihe niile, ihe ị ga-eme na-akụ maka otu awa ma ọ ga-alaghachi n'ebube ya ochie na-ele anya na wiil m ma eleghị anya kwa ọnwa isii ruo otu afọ, dabere na ole onye ọ bụla nọ na-agba m pụtara m nhicha na-ehicha ọhụrụ na ebe a na-etinye oche ọhụrụ. na ị yinye teepu okporo ígwè ọhụrụ ee ọ na-efu ntakịrị ego, mana ọ na-echekwa ego na ogologo oge ọ na-akwụsị mgbe ịzụrụ igwe kwụ otu ebe Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu nkọwa gbasara ọrụ ọ bụla, njikọ ndị a dị na njedebe nke isiokwu ahụ clickable nke ga - eduzi gị ịnara Ọ baghị uru etu i si bido, ọ chọrọ nhicha zuru oke ugbu a ma ọ bụrụ na ị hụbeghị ya mbụ. Lelee ederede anyị nke na-akọwa etu esi eme ihe ị na-achọghị ime, n'agbanyeghị na ị ga-ehichapụ agbụ ahụ n'ihi na m ga-ewepụ ya, m ga-ewepụ ya wee tinye ya na ya Nke mbụ, amaara m ụdị ọnọdụ m na-agba ịnyịnya ga-apụta n'ezie na m ga-elekọta ezigbo ekweisi ntị, ájá na mmiri nwere ike ịbanye n'ọsọ ala ebe ahụ ọkachasị na ọ nwere ike ịmịpụta agba ahụ wee were igwe kwụ otu ebe. N'elu kpughee azuokokoosisi ahụ ma wepụ ihe ndụdụ ị ga - ahụ na - agbatị ala ma mee ka ọ dị ọcha wee kpochapụ ya nke ọma na akwa ma wepụ griiz ochie echefula n'ime etiti ahụ ebe m nọ ebe a. mee Top Race tinyekwa ihe niile na ụfọdụ griiz ma ugbu a jikọtara ọnụ mgbe a na-ewepụ agbụ m na-ewere ohere iji chọpụta nrịbaokwu m na nkwado m, nye ha ezigbo ntụgharị ma ọ bụrụ na ha bụ ihe ọ bụla ma ọ dị nro mana m na-eche maka dochie ha ma ọ na-efu ntakịrị ego mana nke ahụ bụ ọrụ zuru oke mgbe niile a mma ọhụrụ ala mgbodo na-eme ka a nnukwu ihe dị iche ugbu a, m mgbe niile iyi m breeki - na ịgbanwee Gịnị iji dochie ma n'ihi ezi ihe mere ha na-kpuchie na ájá na a mgbe niile ma ọ bụrụ na ị na-ebibi kpamkpam braking na shifting àgwà m zuru isiokwu na-akọwa otú ime na, ma ọ bụrụ na ị na-ala ọ bụ a n'ezie ngwa ngwa ọrụ, n'ihi ya, ọ bụ akụkụ nke ọrụ a idozi kpọmkwem na anyị ugbu a mkpa iji dochie gị Gịnị ka tufuo gị handlebar teepu na a stof bụ nnọọ idiocha ya mere na ọ bụ a zuru okè ohere iji wepu ya ma kpochapu ya nke oma m na-acho inweta eriri igwe m na eriri teepu n'otu aka ahu ike gwụrụ ma i kwesiri ima usoro iji mee ya, anyi nwere ntuziaka ndi ozo ma lee ha ka ịpị oh, pịa njikọ ndị ahụ na njedebe nke isiokwu ahụ mgbe ị gbanwere eriri ndị anyị nọ na sukashi index nke gia ruo mgbe anyị ga-enweta sistemụ ọhụrụ anyị, yabụ were agbụ ọhụrụ gị wee tụọ ya na nke ochie ka ọ bụrụ ziri ezi bụ otu ogologo na mgbe dị nnọọ slide ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na eriri ndị ahụ dị na ntanetị bụ n'oge maka ntinye aha ugbu a anyị nwere isiokwu zuru ezusexplpl Ọ bụ kpọmkwem otu ị si eme nke ahụ na ngwa gị wee pịa nke a na bọọdụ ikpeazụ.
Naanị ọrụ abụọ ọzọ tupu m mechie teepu aka ahụ, achọrọ m iji aka m dị ọcha attbanye na teepu aka ahụ na-acha ọcha Ọ dịghị ihe dị njọ karịa ịnweta stains na ụlọ mmanya ọhụrụ gị echefuru m oge niile na ị kwesịrị ịlele mgbe niile iji hụ ma oche oche gị chọrọ nkwalite, ugbu a, nke a bụ carbon-carbon yabụ na ọ nweghị isi ma ọ bụrụ na ịnwere etiti aluminom na post A-carbon ma ọ bụ post aluminom na etiti carbon ha abụọ nwere ike ịrapara ọnụ nke ọma ma enwere m nke ọ bụla na ya Ọtụtụ kaadị carbon na okpokolo agba aluminom furu efu. Ọ bụ ezi echiche ị cheta ịlele ya ugboro ugboro wee wee Ryan, igwe kwụ otu ebe gị kwesịrị ịdị ka nke ọhụụ, ee, ị ga-etinye obere ego mana akụkụ ndị a niile dị ọnụ ala ịzụrụ na ọ dị mkpa dị ọnụ ala karịa ịzụta igwe kwụ otu ebe kpamkpam, yabụ ọ pụtara nhicha zuru oke, na-ete mmanụ na bekee, tebụl ọhụrụ, yana ịkekọrịta na teepu aka ọhụrụ, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịma etu esi eme ihe ndị a. buru n'uche na ị nwere ike pịa njikọ ndị a iji hụ nduzi dị mkpa
Ndi Halfords ka na-emezi igwe kwụ otu ebe?
Anyị nwere ike mepụta a dịgasị iche iche nkeịrụzi igwena agbajikwa akụkụ, ma ọ bụ dabara ọhụrụ ebe chọrọ.
Tupu anyị agba ịnyịnya ígwè, anyị kwesịrị ịgba mbọ hụ na anyịnya igwe agaghị adị mma. Mcheck bụ ụzọ dị mfe ma dịkwa mfe iji jide n'aka na igwe kwụ otu ebe gị dị mma tupu ịnya igwe kwụ otu ebe. Maka M-Lelee anyị na-amalite na wiilị mbụ, kwaga na njikwa ahụ, wee gbadaa na nkwado ala, na sadulu, tupu ị gwụchaa ụkwụ azụ.
Ọ dị mma, malite na wiilị ụkwụ anyị kwesịrị ijide n'aka na ọ siri ike yana onye na-agbapụta ngwa ngwa nọ n'ọnọdụ mechiri emechi. Anyị kwesịrị ijide n’aka na ọnụ ndị ahụ niile na-ada mba ma na-adịghị agbajikwa, anyị kwesịrị ijide n’aka na taya ahụ na-enwe nrụgide ma na-elegharị anya na gburugburu taya ahụ iji hụ na enweghị ebe ọ bụla, mgbawa, ma ọ bụ akpụ. dị. Ọ dị mma, ugbu a, ka anyị gaa ebe ejiri aka wee lelee brekị.
Jide leba ihu ihu, kpoo igwe kwụ otu ebe n’ihu mgbe ụkwụ azụ ahụ si n’elu ala pụta, mgbe ahụ breeki gị ga - arụ ọrụ, mezie otu ihe ahụ na breeki azụ n’azụ azụ, dọpụta igwe kwụ n’azụ, ugbu a, ụkwụ ihu ga - apụ si n’ala. Ọ bụrụ na ị na-eme nke a, mgbe ị dọtara ekike ahụ, igwe kwụ otu ebe ka na-aga n’ihu ma wiil ahụ ebupughi n’ala, ọ pụtara na breeki gị chọrọ nlebara anya tupu ị gawa. Ọ dị mma ugbu a, anyị ga-enyocha njikwa ahụ ka m gaa n'ihu ijide wiilị ụkwụ dị n'agbata ikpere m ma kpoo aka ahụ.
Ugbu a, ha ekwesịghị ịkwaga n'adabereghị na igwe kwụ otu ebe, dịkwa mma, yabụ na ọ dị mma, ọ bụrụ na aka gị na-agagharị dị ka nke a, ị kwesịrị ị toa ntị na nke ahụ tupu ịgba ígwè. Ihe ọzọ anyị ga - atụle bụ ọnụego ụtụ, nke dị ebe a. Thezọ kachasị mma iji mee nke a bụ ịgbanye njikwa 90 ogo, jidesie ya ebe a wee nwee ike ịkwagharị igwe kwụ otu ebe na-aga n'ihu, enweghị ije ọ bụla, ọ dị mma aka ahụ ka ogwe ahụ ga-agagharị n'enweghị mkpọchi.
Odi mma na nke ahu di nma, ugbu a ka anyi gbadaa ala na bracket. Anyị nwere ike ilele pedal. Gbaa mbọ hụ na ha tụgharịrị n’efu ma ghara ịdị umengwụ, otu ihe ahụ dị n’akụkụ nke ọzọ na-atụgharị n’efu mana ha anaghị adalata ụda. Ugbu a, anyị ga-elele ihe nkwado ala ahụ dị mma nke mere na ị ga-ejide ogwe aka ebe a wee wiggle, ekwesighi inwe ụdị egwu ọ bụla, ọ dị mma.
Ọ dị mma na nyochaa ike ngwa ngwa iji mee nke a. Naanị zaghachi azụ ka ihe niile na-agagharị n'enweghị nsogbu. Ọ bụrụ na m nọ n'ụgbọ na-ezighi ezi, m ga-eme ya n'echeghị echiche.
Ọ bụrụ na m nwaa ịkwaga ya ị ga - ahụ na ọ naghị aga nke ọma yabụ ihe niile anyị ga - eme bụ iweli ụkwụ azụ ma ọ ga - agbanwe gaa gia ma ugbu a ihe na - agagharị kpamkpam. Ugbu a, anyị enyochala ụgbọ okporo ígwè na anyị ga-aga sadulu ma na-eme nke a, anyị kwesịrị ilele etiti ahụ iji jide n'aka na ọ nweghị mgbape, ọnya, enweghị mmebi. Anyị nwere ike ile anya ebe a na ebe a yana ị na-aga site na ya iji jide n'aka na etiti gị dị n'usoro.
Mgbe ị rutere na sadulu jide n'aka na ọ bụ ezi ziri ezi na nchebe nke mere na ọ na-ama jijiji ntakịrị ka ọ ghara ịkwaga. Ugbu a maka ụkwụ azụ, anyị kwesịrị ijide n'aka na ọ dị nchebe na onye na-agbapụta ngwa ngwa nọ n'ọnọdụ ahụ emechi, ọzọ na ọnụ, jide n'aka na ha niile na-enwe obi mgbawa na ọ dịghị onye n'ime ha gbajiri ruo mgbe taya ahụ jide n'aka ijide n'aka na taya ahụ agbachaala ma lelee akụkụ mgbidi maka mgbawa, iyi, na bulges. Yabụ ọ bụrụ na ị zute nsogbu na-emegharị M-Check, gbaa mbọ hụ na idozi ha tupu ịnya igwe kwụ otu ebe, ma ọ bụrụ na ọ bụghị, mgbe ihe niile dị mma na anyị nwere ike ịnya ịnyịnya.
Kedụ ka m ga-esi gbaara igwe kwụ otu ebe n’onwe m?
Ugboro ole ka i kwesịrịọrụnke giigwe kwụ otu ebe? Should kwesịrị ị na-anyaọrụnke giigwe kwụ otu ebeiji hụ na ọ na-arụ ọrụ nke ọma yana na enweghị akụrụngwa akwara ma ọ bụ mebiri emebi.
Lelee wiilị gị.
Kwadoo Ihe Niile.
Lelee Brakes / Cables.
Lelee Ngwá Ọrụ Gị.
Nyochaa,Dị ọchaNa Lubricate Drivetrain ahụ.
You nwere ike iji wd40 n'agbụ igwe kwụ otu ebe?
Ihe niilegịkwesịrịmeena-itucha naigwe kwụ otu ebeiwepu apịtị ọ bụla na oke unyi.GbaiheWD-40 BikeDegreaser n'elu gịigwe kwụ otu ebema nye ya oge zuru ezu iji rụọ ọrụ. Na n'elu nke, naWD-40 BikeDegreasernwere ikeịbụejimaka nhicha na degreasing nke ọzọ na-akpụ akpụ akụkụ dị ka mma.
The nkeziOnye nwe ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebeenweta $ 49,877 kwa afọ. Nke abuọ dị mma karịa nkezi mba maka ndị ọrụ niile, mana nke abuọ bụghị ọrụ dị mfe n'ụzọ ọ bụla.Mar 3 2014
Igwe igwe igwe igwe igwe abughi ezigbo oru?
Ọfọn, ọ bụghị n'ezie. O di nwute na obughi oru di ezigbo onu ahia na otutu ebe igha enweta ego kacha nta ma obu nke di n’elu. Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na aezishop, ọ ga-ekwe omume ịme aeziụgwọ, ma a gaghị ebugo gị. Nwere ike ichekwa otutu ego dikaarụzi.11 nov. Dec 2019
Kedu ihe bụ ikike na igwe kwụ otu ebe Halfords?
Ihe niileanyịnya igwezụtara naHalfordsbia na onwa iri na abuoakwụkwọ ikikemegide nrụpụta nrụpụta.
Kedu mmanụ ị na-eji na igwe kwụ otu ebe?
ÌhèMmanụ. Ìhèmmanụna-a kasị mma n'ihi na g?agbụ ígwèná nkezi, ịkpọọ nkụ ịnya ịnyịnya. Ìhè mmanụ dị mma na penetrating na bushings nkeagbụiji belata oge ejiji nke na-eme n'etiti njikọ.
Ebee ka ị na-agbanwe 2 ị na-arụzi igwe eji agagharị agagharị?
Ebe ọ bụla dị gị mma. Rolling 2 is bụ ụlọ ọrụ na-arụzi igwe eji arụ ọrụ igwe eji arụ ọrụ nke nwere ihe karịrị afọ 17 na ụlọ ọrụ igwe. Anyị na-enye ọrụ ndozi igwe eji agagharị agagharị na Erie County, PA, Northeast Ohio, na obere akụkụ nke Western New York State.
Kedu ihe ị kpọrọ ụlọ nrụzi igwe eji agagharị?
Chetakwa, anyị bụ ụlọ nrụzi igwe eji agagharị agagharị na-abịa n’ụlọ gị ma ọ bụ azụmahịa gị. Ebe ọ bụla dị gị mma. Rolling 2 is bụ ụlọ ọrụ na-arụzi igwe eji arụ ọrụ igwe eji arụ ọrụ nke nwere ihe karịrị afọ 17 na ụlọ ọrụ igwe.
Enwere ọrụ ọ bụla enwere ike ịrụ na igwe eji agagharị?
E nwere ọrụ ole na ole anyị na-enweghị ike ịrụ site na ọrụ ekwentị anyị. Ndị a gụnyere ọrụ nkwusioru, mmezi pivot, nhicha ụgbọala, ịchọta creaks, na-arụ ọrụ na igwe kwụ otu ebe, wdg. Biko ghọta na anyị na-ahazi ụbọchị anyị gburugburu ọrụ a na-ahụ anya nke nwere amụma oge chọrọ.